I bob wokuqala noma izinwele ezinde?
Enezinwele ezinde, ungenza noma yini inhliziyo yakho ufisa. Owesifazane sivala ezinhle kungenziwa siguqulwe ngosizo packings kanye haircuts, ukwakha isithombe esiyingqayizivele. Ngezinye izikhathi siqala ukucabanga ngalokho ukukhetha - bob noma izinwele ezinde? Manje Quads sezibuyele esimweni imfashini, nezinye izinhlobo zayo ezihlukahlukene eziningi. Kungabi ugezekile wonke obuphelele njalo, kungenzeka ukuthi ucabange ngalokhu isitayela sezinwele. Ngokwesibonelo, ukwenza Quads letihlungiwe ku izinwele ezinde. Lokhu ukugunda izinwele kusho kuvulwa entanyeni, phambi kukhona edingekayo obuphelele curls. Noma enye indlela - ". Esigcawini phambi, kusukela izinwele ngemuva eside" nezinwele Siphakamisa ukucabanga kokubili ongakhetha, cabanga ukuthi yini enye ongayenza izinwele.
ukuba ingaphandle lwezimfanelo zalabo abangase babe bob iziqu
Lona omunye ethandwa kakhulu ukuhlukahluka yamuva kwi bob izinwele ezinde. buka engemuva oluhambisana kwekhanda esifushane, futhi phambi kubonakala sengathi yinde. Nale kwekhanda ungagcina ubude, asuse semikhawulweni Split, futhi izinwele ababuthakathaka, ukugcizelela izinzuzo ukubukeka, ukufihla amaphutha ayo. Kodwa akubona bonke yalolu hlobo lapho uya khona. Uma ucabanga ngombuzo kanjani ukwakha isikwele noma izinwele ezinde ukuhamba, futhi uphiwa inketho of nezinwele letihlungiwe ke acabangisise ngokubukeka kwabo. Ngakho, obani abayoba ivumelane kwekhanda, futhi ubani - akukho?
Izinwele kufanele kube iqonde kusuka imvelo noma waqonda. Libuye akutuseki ukudala bob iziqu izinwele mncane futhi kwaphela. Uma une ikhanda obukhulu izinwele, haircut uyobheka amangalisayo.
Ladies nge ezisontekile, le kwekhanda is contraindicated. Iqiniso liwukuthi ekubeni imicu short uqale zinyakaze nakakhulu, yihlongandlebe futhi ngeke ubambe ukuma. Uma wenza lolu hlobo isigwebo phezu izinwele ezinde emuva kwekhanda uyobheka nokubiza, okungekuhle.
Kubalulekile ukuba ube nentamo enhle nge isikhumba enempilo. Lapho barber kuzosusa emuva obuphelele entanyeni njalo evulekile, ngakho udinga ukwenza kukhanga.
Nezinye izici ukubukeka ngeke kuthinte ukugunda izinwele, ungakha kulo ngokuphephile. Abesifazane enobuso ngokugcwele noma round square ukusiza zibukeke ewumngcingo ke. Girls ngobuso nomzimba omncane, futhi, akakwazi esabe ukwakha isigwebo letihlungiwe, njengoba kwekhanda kuhilela ukusika phandle, kuzobalwa kuphela sikhulise ubuhle izici.
Izimfuneko ukugunda izinwele
Lolu hlobo yokubeka of izinwele ezinde ngaphandle esiphongweni kanye esiphongweni ngeke likhanga. Ngaphambi kokuya wezinwele udinga sicabange kahle ngokuthi yini ofuna ukuthola yalokho. Okwesibili, lokho kudingeka unqume ubude imicu phambi. Othile ngizoya kwesokunxele kuya izinwele kwesilevu, othile ukhange njengomuntu inketho imicu eside.
Cabanga indlela izobukeka ukugunda izinwele zakho ngenxa yalokho, noma kunjalo, kufanele uthole okweqanda.
Wezinwele kumele moisten zonke sivala ukugwema vybivshihsya imicu. Izihlahla iqala kusukela entanyeni, izinwele isuswe engela kusukela phezulu phansi. Ukuze uthole kwekhanda ephelele ziyalingana, ngaphambi wayegunda strip ngemuva zihlukaniswe izingxenye alinganayo. Lapho sostriganii kumelwe bekuqhathanisa ubude besikhathi ukuqeda semfene.
Umhlane angahlala ezahlukene izinwele obuphelele. Abanye bakhetha nje kancane ukuze unciphise le bob zakudala, umuntu ofuna ayinyuse umqhele, kodwa kuzothatha esiphezulu anqunywe sivala. Ukuze banqume ukuthi iyiphi inketho luncanyelwa, siphakamisa ukucabangela izinhlobo eziningana haircuts.
Nge isandiso emlenzeni
Kuyinto inketho ethandwa kakhulu, njengoba angasayindwa ku izinwele intombazane noma yiluphi uhlobo lomuntu. Ngaphezu kwalokho, le kwekhanda ayidingi ukunakekelwa njalo, uyobheka okukhulu, uma une nentamo ende. Lokho uzoba ivolumu ezinhle ngaleso umqhele, izohlala ngemuva ngokushesha nje lapho izinwele futhi zingu phambili kuyoba eside. haircuts bheka lizofana amakhowe cap, Fluffy nezinobunono nasentanyeni ngeke ngezinyawo!
Izinzuzo lokhu izikwele yavama. Umnikazi wale kwekhanda kungaba yokudaya izinwele e ngokuphelele yimuphi umbala, futhi ungakhetha umbala imicu ngabanye kanye esimweni ngasinye kuyoba njengabesifazane kanye ezikhangayo. Ngaphezu kwalokho, umuntu angabona uzizamele umphetho, kungaba ngokuqondile, etshekile noma quin. Lokhu bob ezinde ngaphandle esiphongweni - option ubuye eyamukelekayo, kodwa kungaba ngcono ngalo. Bangs ukwazi ukufihla amaphutha ukubukeka, ulungise izici zobuso.
Angular iziqu bob
Versatility ukugunda izinwele kuyinto inkimbinkimbi abulawe yayo, ukubukeka ekhangayo, asikho isidingo ukuba njalo ukwakhela kulo. Lokhu isigwebo kusho kwelulwa kancane kancane izinwele kusukela phezulu kuya amathempeli phambili ingxenye. charm zezinwele ukuthi ekhangayo, kancane kabi. Lolu khetho ngeke ukhethe abesifazane abathanda ukukhanya futhi ubuntu esithombeni. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo ongafaka isicelo ngokwabo namantombazane abacaphuni.
Lena enye yezinhlobo ezingu nokulungiswa bob ukugunda izinwele. Sici Its yiyona engela oyingozi okuyinto etholakala kusukela entanyeni kuya kwesilevu. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi kwekhanda yokuthi kungaba azilingani, ubukeke umuhle ku izihlathi.
Izinzuzo i square side
Abesifazane kanye izinwele okuhle eside, ungakha eningi ikhanda lakhe nezinwele zakhe, uma nezinwele - Quads. izinwele ezinde noma anobude naphakathi - le ndlela ngeke bheka amazing. Ngaphandle kokusetshenziswa kwezimali isikhathi esiningi, sibonga isikwele side, ungakha eningi izithombe. Lokhu izinwele podvitie uphela, futhi ukudalwa curls nokwelulwa egcwele. Side izinwele square eside ngaphandle esiphongweni, futhi sibukeka sisihle, isifuthefuthe cishe njalo owesifazane.
Lona omunye zezinwele ethandwa kakhulu nenhle. Ukuba ayilime, ayigcine akudingi isikhathi esiningi isitayela kuthatha imizuzu eyishumi kuphela, futhi kubalulekile esikhathini sethu!
Side square ezinde ngaphandle esiphongweni ngeke ivumelane ngokuphelele noma yiluphi uhlobo lomuntu. Izogcizelela zonke izinzuzo ukubukeka, engeza nesifazane. Lokhu kwekhanda kuzovumela ukudala ivolumu ezengeziwe izinwele elincanyana. Lokhu izikwele kahle izingubo besifazane, futhi isambatho ezemidlalo. Kuyinto jikelele - le kwekhanda, ungaya umcimbi, ejimini, ephathini nabangani. Ngomqondo square side ubukeka iyiphi ukwakheka, alunguza ikhange nakakhulu futhi kube ezithakazelisayo.
isikwele side ku izinwele ezinde nge esiphongweni ivumela ukufihla amaphutha. Kuphela uma ebunzini ongaphakeme ke esiphongweni is hhayi Kunconywa kuleli cala.
I bob zakudala side izinwele ezinde
Lolu hlobo akuyona asymmetry esingokwemvelo. Stylist izinwele cut emgceni locondzile, kangangokuthi bushelelezi. Front sezimfushane kuka langemuva, ngemuva obuphelele zinyakaze akufanele kube ngaphansi kuka-izindwani nokuthela amanzi emhlane wedada ukuma, nokubukeka. Izinwele isuswe amasentimitha okungenani ezintathu, kanti thina usike wonke amathiphu posechennye. Ngale ndlela, curls bathuthukise impilo yabo, baba bahle ngokwengeziwe. Ukuze uthole zakudala isici side esiphongweni square, kodwa ungenza ngaphandle kwalo, ikakhulu uma lowo muntu umumo isiyingi.
Asymmetric square oblong
Njengabesifazane ababevame ume. Kubukeka enkulu, kuzuzise ugcizelela isithunzi sabo bonke, bakwazi ukufihla amaphutha. kukhanga kakhulu, le kwekhanda ubukeka ngaphandle esiphongweni. Nge kwekhanda enjalo ihlanganisa kahle imibala egqamile futhi kumnyama curls, blonde thukela lolu hlobo akhethe. Nge bob azilingani kungenziwa igqoke ngokuphelele yimuphi izingubo, kungaba isudi esisemthethweni, dress kusihlwa noma ingubo ihlobo ukukhanya. Yenza-up, futhi, kungase kube yimiphi kobulili okungokwemvelo ukuba elikhanyayo.
isikwele Front, ngemuva izinwele ezinde
Lokhu ukushintshashintsha haircuts nemfashini. Kuyinto ethandwa ngoba eminyakeni emithathu edlule, akaphelelwa lokuhambisana. isithombe Mangalisayo ingatholakala kuphela uma inezinwele ezinde ngempela. Abantu bakholelwa izinto ezihlukahlukene, kungaba phambi izinwele ukuncishiselwa isitayela bob zakudala, banciphisa ungqimba phezulu kanye, uthola cap umfuzile. Ezinye kwakwakhiwa kakhulu fair ubulili, umbala "cap" ngombala owodwa, kanye nabo bonke abanye ubude - kwesinye, ukugcizelela ukuze kuvele umehluko. Yiqiniso, ungahlala ngombala owodwa.
Eyesibili inketho - esigcawini phambi, nangemuva kukhona izinwele nje eside, abadinga Ukunquma emaphethelweni. Lokhu kukhetha ethandwa kakhulu, kufanelekile yiluphi uhlobo lomuntu.
Inketho yesithathu - ukudalwa phambi bob quin, futhi kungenziwa mfushane. Ahambisana Naleli izinwele futhi uyonquma izingqimba (cascaded), ngezinye izikhathi ingaba umthombo anobude obungalingani. Plus le ndlela - kufanelekile curls abacaphuni uyobheka nakakhulu ongaqondakali futhi emuhle.
KUZOSINDA noma izinwele ezinde? Kungani kufanele ukhethe lapho nezindlela eziningi kangaka ngokuhlanganisa kukhona! Ayikho owesifazane, ukukhetha enye yalezi zindlela, yaqashelwa, awujabuli imiphumela. Uma ukhathele ejwayelekile yakho izinwele ubude, uzizamele ngesibindi ngokubukeka, ngoba isithombe fresh - kungcono njalo nice. Sithuthukisa kwemizwelo, kukuvumela ukushintsha isithombe, ukuthenga izinto ezintsha ezimbalwa likhanga nakakhulu. Uma unquma ukuthi kungcono - bob noma izinwele ezinde, ukuhlolwa indlela yakhe. Yiba amahle!
Ukuzifihla "Els Fibrologiya" (ukubuyekezwa)
Mummy izinwele kanye isikhumba
Laxative iphephile futhi isebenza ngempumelelo ekukhulelweni: kanjani ukukhetha ke?
Lira Turkish ukuze dollar kanye nezinye zezimali
Indlela ukhiya umuntu "Ofunda nabo": wonke lwabashokobezi
Induna kwentsha - indlela balahle kubo?
The main izinto eziza kuqala lapho ukhetha ukudla cat